Yimaphi amaphilisi okunciphisa isifiso angcono futhi aphumelela kakhudlwana? > Imithi
Imaphi amaphilisi asebenza ngempumelelo kakhulu ukunciphisa isifiso sokudla?
Namuhla emashalofini omakhemisi kukhona uhla olubanzi lwamaphilisi wokunciphisa isifiso sokudla, athembisa ukunciphisa umzimba ngokushesha. Ukuthatha izidakamizwa ezinjalo, umuntu akazizwa elambile, adla okuncane, okungukuthi, inani lamakhalori angena emzimbeni liyancipha futhi amakhilogremu angeziwe anyamalale. Ukwengeza umphumela, izidakamizwa ezinje ziyanconywa ukuthi zihlanganiswe nokudla kanye nomsebenzi owengeziwe womzimba.
Kodwa-ke, izazi zezempilo eziqeqeshiwe zixwayisa ukuthi nezidakamizwa ezisezingeni eliphakeme zokulahlekelwa isisindo, ezenziwa yizinkampani ezenza imithi ezinokwethenjelwa, zinokuphambana okuningana futhi zingavusa imiphumela emibi kakhulu. Yini esingayisho ngokudla okungenamsoco kokudla okugcwala emashalofini asekhemisi. Ukwemukelwa kwale mithi ye-pseudo ngokuphelele ngeke kunikeze imiphumela oyifunayo, futhi okubi kakhulu kungalimaza impilo. Ukubuyekezwa kwethu kuzokusiza uzulazule olwandle lokuthengwayo bese ukhetha amaphilisi aphephile futhi asebenzayo wokunciphisa isifiso sokudla.
Indlela yokwenza kanye nezinhlobo zezidakamizwa ukwehlisa isifiso sokudla
Ochwepheshe abancomi ukuguqukela ezenzweni eziguquguqukayo njengokudla amaphilisi okudla uma usuthole amaphawundi ambalwa wesisindo ngokweqile. Kulokhu, kungcono ukulungisa isibalo ngosizo lokudla okune-carb ephansi, indlela esebenzayo nenempilo. Imishanguzo eminingi yokwehla kokudla yenzelwe ukwelapha ukukhuluphala, okungukuthi, kwiziguli ezinesisindo esikhulu somzimba kanye nezifo ezibucayi (isibonelo, isifo sikashukela, i-bulimia, noma ukudla ngokweqile). Isazi sokudla kufanele sibabeke, emakhemisi lezo zimali zidluliselwa ngomuthi.
Zonke izinhlobo zezithako zokudla zisekelwe kokunye okukhishwe izitshalo okucindezela indlala futhi okunezindawo ezishisa amafutha. Yileyo mikhiqizo kuphela eye yadlula izivivinyo somtholampilo kanye nesitifiketi esidinga ukukhethwa. Izithasiselo ezinjalo ziphephile, kepha zingavusa nokuphazamiseka okuhlukahlukene kwezinqubo zokugaya nezinzwa.
Ngokuya ngomshini wesenzo, izidakamizwa zokunciphisa umzimba zihlukaniswe ngamaqembu ambalwa:
Ama-anoretics - izidakamizwa zokucindezela isifiso sokudla, zisebenza ngqo ezindaweni zobuchopho ezibhekele umuzwa wendlala. Umgomo wama-anoretics ukuthi amasignali wamanga mayelana nokuhluthiswa athunyelwa ebuchosheni, ngenxa yalokho, isifiso sokudla somuntu siyancipha, futhi ugcina kalula nokudla okuqinile kakhulu. Esithweni semithi ethandwa kakhulu yi-drug sibutramine. Kodwa-ke, leli qembu lezidakamizwa libhekwa njengeliyingozi kakhulu, ngoba yandisa ubungozi bemiphumela emibi kakhulu, kuze kube nokuphazamiseka kwengqondo noma kubangele ukuphikiswa okuqhubekayo kokudla, ukukhathala kanye ne-anorexia. Abamele ama-anoretics yiReduxin, Goldline, Lidax, Thalia, Lida, Slimia. Ukuthatha imali enjalo kufanele kube ngemuva kokubonisana nodokotela wezokudla noma i-endocrinologist.
Ama-blockers amanoni (abashisi bamafutha) - amalungiselelo aqukethe izinto ezifana ne-L-carnitine, i-ephedrine, i-caffeine, itiye eliluhlaza noma i-grapefruit extracts ezisiza ukudiliza amafutha. Amanye amathuluzi asebenza ngempumelelo ngisho nangaphandle kokuzivocavoca ngokwengeziwe komzimba - mane unamathela ekondleni okufanele. Izidakamizwa ezifanayo nazo azinabungozi. Isibonelo, i-caffeine icasula ukungahambi kahle, ukwesaba, ukukhuphula umfutho wegazi, kuthinte kabi ukusebenza kwesistimu yenhliziyo, kanye nokukhipha itiye eliluhlaza kungadala ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo nokuphazamiseka kokugaya ukudla.
Ama-Filler - amalungiselelo aqukethe i-microcrystalline cellulose (MCC), edonsa esiswini futhi isikhathi eside idala umuzwa wokudangala. Abamele leli qembu bathathwa njengabaphephe kakhulu, kepha futhi bangathinta nomgudu wokugaya ukudla, bavuse isicanucanu, ukugabha, nobuhlungu besisu kanye nezinye izinkinga zedyspeptic. Abamele leli qembu yi-Ankir-B, Turboslim, Tropicana Slim, Apetinol.
Phakathi kwamaqembu abhalwe phansi, ukunciphisa isifiso sokudla, ikakhulukazi sebenzisa imali evela eqenjini lama-anorethics nabahlunga. Kufanele zithathwe zihlanganiswe nokudla kilojoule ephansi kanye nokusebenza ngokomzimba okusebenzayo, ukunamathela ngokuqinile kwizincomo ezichazwe kwimiyalo.
Amaphilisi wokudla othambekele ngaphezulu kwe-the-counter
Amaphilisi ashibhile okunciphisa isifiso sokudla enkampanini yaseRussia i-Evalar ahlanganiswe ngokuphelele ama-cellcose ama-microcrystalline, ngakho-ke awunanzuzo yokudla futhi awunawo amakhalori. Cindezela isifiso sokudla ngenxa yokuthi i-cellulose iyajuluka esiswini, yakha umuzwa wokuphefumula. Izinzuzo ezingezekile zifaka ukuvimbela ukumuncwa kobuthi emathunjini kanye nekhono lokubopha nokubopha i-cholesterol.
Ngasikhathi sinye, umuthi usebenza kuphela emgodini wokugaya ukudla, ngaphandle kokuthinta ukusebenza kobuchopho, ngakho-ke kubhekwa njengeyona ndlela ephephe kunazo zonke yokulawula isifiso sokudla. Amathebulethi athathwa ngokudla, umthamo wansuku zonke usukela ezingxenyeni eziyi-9 kuye kwezingu-15, uhlukaniswe ngemithamo emithathu. Ngesikhathi sokulashwa, kufanele usebenzise amanzi amaningi (okungenani amalitha ama-2 ngosuku). Inkambo yokwelashwa yenzelwe inyanga. Izindleko zomuthi zivela kuma-ruble ayi-180 iphakethe ngalinye lezingcezu eziyikhulu.
Umuthi uhloselwe ukulawulwa kwesifiso sokudla kanye nokwehla kwesisindo. Lokhu kuyikhambi lemvelo, kubandakanya i-cellulose (MCC), ukukhishwa kwe-cactus ne-coleus. I-Citrus pectin inika ukunambitheka okumnandi kumathebulethi. I-BAA yathuthukiswa osokhemisi abavela eSwitzerland ukucindezela indlala, ukusheshisa imetabolism kanye nokusetshenziswa kwamafutha. I-Apetinol ayinciphisi kuphela isifiso sokudla futhi ivimbela ukudla ngokweqile, kodwa futhi yehlisa ushukela wegazi ne-cholesterol. Umuthi uyatholakala ngesimo samaphilisi, kunconyelwa abantu abanomkhuba wokukhuluphala, ukuhlwitha ebusuku nokuphazamiseka kwemizwa okuhambisana "nokubamba" ingcindezi.
Lesi esinye sezidakamizwa eziphephe kakhulu ezingabangeli ukuphazamiseka kwe-dyspeptic futhi sinobuncane be-contraindication. Phakathi kwazo - ukungabekezelelani komuntu ngamunye kanye nokwanda kwezifo zesisu. Umthamo ojwayelekile ngamaphilisi amabili ekuseni nakusihlwa, okudingayo ukuwaphuza nengilazi yamanzi. Ukuphuza irejimeni kuyo yonke le nkinga yokwelashwa - okungenani amalitha ayi-1,5 uketshezi ngosuku. Intengo ephakathi yesidakamizwa ama-ruble ayi-150 ngephakethe ngalinye lezingcezu ezingama-40.
I-Tropicana Slim Green coffee (Evalar)
Enye isengezo se-microcrystalline cellulose esekelwe ngokukhishwa kwekhofi eluhlaza. Umuthi awugcini nje ngokudla isifiso sokudla, kepha futhi ukusheshisa ukushiswa kwamafutha omzimba. Kutholakala emaphaketheni, izingcezu ezingama-60 iphakethe ngalinye. Leli thuluzi likuvumela ukuba uthayiphe isibalo ngokwenza i-carbohydrate ne-lipid metabolism, isebenze izinqubo ezihlose ukushisa amanoni. Ngaphezu kwalokho, igcina amazinga kashukela egxilile, ibopha futhi isuse i-cholesterol, inikeza umphumela we-antioxidant.
I-Tropicana Slim cishe ayinakho ukuphikisana (ngaphandle kokungabekezeleli), ayibangeli imiphumela emibi. Ngezikhathi ezithile kuphela phakathi nenqubo yokwelashwa ukuphazamiseka kokulala kuphawulwa. Inkambo ejwayelekile yokwelashwa yinyanga, ngalesi sikhathi udinga ukuthatha ithebhulethi engu-1 ekuseni nakusihlwa ngaphambi kokudla. Intengo ephakathi yesidakamizwa ivela kuma-ruble ayi-650.
Ukulawulwa kwesifiso seTurboslim
Esinye isidakamizwa esivela enkampanini i-Evalar, esesikhundleni esiphambili sokuthengisa emakethe yasekhaya. Itholakala ngesimo samathebhuleki ahlafunwayo, okuyisisekelo sawo yi-hoodi gordonium cactus ekhishwa, okuqeda umuzwa wendlala ngenxa yomphumela oqondile kuma-elementi wokunambitha. Ukwakheka kwamathebulethi akunazakhi ezinomphumela we-laxative, ngakho-ke umuthi awubeki iziphazamiso zokugaya ukudla. Enye inzuzo ukuthi amaphilisi awadingi ukugezwa ngamanzi, ngakho-ke angathathwa noma kuphi futhi nganoma isiphi isikhathi esivumelana nocezu olu-1 ngaphambi kokudla.
Kunezinye izinhlobo eziningi zemikhiqizo yokunciphisa isisindo ebizwa ngokuthi iTurboslim - lawa angamaphilisi (uSuku nobusuku), itiye nekhofi iTurboslim. Zonke zenzelwe ukusebenza nge-metabolism yamafutha, zisheshise ukuqhekeka kwamafutha futhi zinciphise isisindo ngenxa yokukhishwa kwezitshalo (i-lemon balm, itiye eliluhlaza okotshani, i-guarana, izithelo zezithelo zomdumo, i-bioflavonoids, izithasiselo zevithamini). Phakathi kwalezinhlobonhlobo zezithasiselo zokudla, ungahlala uzikhethela inketho engcono kakhulu yokunciphisa isisindo. Izindleko ezijwayelekile zezidakamizwa zivela kuma-ruble angama-300.
I-Reduxin isidakamizwa esinamandla esivela eqenjini lama-anorethics asetshenziswa ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kokukhuluphala. Kususelwa kwinto sibutramine, esebenza ezindaweni zobuchopho ezibhekele ukugcwala. Kutholakala kumakhompiyutha anomthamo wento esebenzayo 10 no-15 mg. Ukuthatha umuthi kusiza ukulawula hamu futhi kunciphise isidingo sokudla okuvamile.
I-Reduxine, njengezinye izidakamizwa eziqukethe i-sibutramine, iyatholakala kumakhemisi anikezwe ukunikezwa imithi. Nikeza leli thuluzi, futhi ulawule inqubo yokwamukelwa okufanele kube udokotela oyobe ekhona. Ukulinganiselwa okunjalo kubangelwa ukuthi uReduxin nezinye izidakamizwa ezine-sibutramine zinohlu olubanzi lwe-contraindication kanye nemiphumela emibi. Ngeke zithathwe ezimweni ezilandelayo:
ngomsebenzi wokuphazamiseka wezinso nokuthambekela,
ukuphazamiseka kwengqondo (i-bulimia, i-anorexia),
ukuba khona kwezidakamizwa notshwala,
ngaphansi kweminyaka eyi-18 nangemva kweminyaka engama-65.
Akukholakali umxhwele uhlu lwemiphumela emibi ethinta cishe zonke izinhlelo zomzimba (imizwa, ukugaya, inhliziyo nenhliziyo) njll. Umuthi kumele uhlanganiswe nokwenza umsebenzi ngokomzimba okwenziwe ngcono nokudla. Leli ithuluzi elibizayo, izindleko zeReduxin kumakhemisi zisuka kuma-1600 ziye kuma-ruble angama-4000.
NjengoReduxin, lo mkhiqizo uqukethe i-sibutramine njengento esebenzayo. Ngakho-ke, imithetho yokusetshenziswa, uhlu lwe-contraindication nemiphumela emibi yale mithi iyafana. Kepha ngokungafani nekhambi lokuqala, le anoretic isebenza ezindaweni ezimbili ngasikhathi sinye, ithinta isisu nezindawo zobuchopho ngasikhathi sinye. Ezinye izinhlobo zeGoldline zengeza i-MCC filler, edonsa esiswini, yelula umuzwa wokugcwala. ISibutramine ngalesi sikhathi ivimba ama-receptors obuchopho, okubonisa lapho kwenzeka indlala, futhi kugqugquzela ukukhiqizwa kwama-endorphin, anikeza umuzwa we-euphoria, akhuphule isimo somoya, amandla omsebenzi futhi akuvumele ukubekezelela kangcono imikhawulo yokudla.
Umthamo ojwayelekile wesidakamizwa uvame ukubhebhetha okungu-1 ngosuku. Mayelana nokwehla kwesisindo, leli yithuluzi elisebenza kakhulu, kepha ukusetshenziswa kwalo kukhawulelwe emiphumeleni eyingozi yezempilo. Intengo ye-Goldline incike kwinani lamathebulethi kuphakethe, futhi isukela kuma-ruble ayi-1000 (kuma-30 ama-pcs) kuya kuma-ruble ayi-3000 (ama-90 ama-PC).
I-Eco amaphilisi okusajingijolo epilisi
Lokhu kuthuthukiswa okuphathelene nobunikazi bososayensi baseRussia, obekwe njengethuluzi elisebenzayo lokunciphisa isisindo noma kungekho msebenzi womzimba. Umuthi uthinta ngqo amafutha omzimba ngaphandle kokuthinta izicubu zomzimba. Lo mphumela utholakala ngenxa yenkimbinkimbi eyingqayizivele ye-extracts yezitshalo (gardonia, raspberry, fucus, orange, guarana).
Amathebulethi amancane anambithelo olumnandi oluhle ngemuva komthamo wokuqala ahlinzeka ukwehla kokudla. Isikhathi sezenzo zabo sifinyelela emahoreni angama-8-9, okuvumela ukuthi uthathe umuthi izikhathi ezi-2 kuphela ngosuku - ekuseni nakusihlwa. Izibhebhe kufanele ziqale zichithwe ngengilazi yamanzi afudumele, abilisiwe. Uma, ngasikhathi sinye sisebenzisa lo muthi, sinciphise umthamo wekhalori futhi ukhuphule ukusebenza komzimba, ukunciphisa umzimba kungafinyelela ku-5 kg ​​ngeviki. Izindleko zamathebulethi zisuka kuma-ruble ayi-950 kuya kwayi-1,500.
Umuthi wenziwa e-China, isenzo okuso okuhlose ngaso ukwehlisa isifiso sokudla kanye nesisindo somzimba ngenxa yokuqukethwe kokukhishwa okuhlukile kwesitshalo. I-Lida ivuselela izinqubo ze-metabolic, ivimba ama-enzyme abhekene nokubonakala kwesifiso sokudla, futhi ilawula ibhalansi ye-hormonal, okuyisizathu esiyinhloko sokuthola isisindo ngokweqile. Ukuthatha amaphilisi kukuvumela ukuthi ungazizwa ulambile isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokulawulwa kwe-metabolism, umphumela wokuphulukisa ojwayelekile uyabonakala, amandla avelayo, ukukhathala okungamahlalakhona kuyanyamalala, namandla omzimba ayanda. Ngokungafani nama-anoretics aqinile asuselwa ku-sibutramine, leli khambi linokuphambana okuncane - lezi yizifo zesisu, inhliziyo nemithambo yegazi, imikhawulo yobudala. Ngokuzwela okwengeziwe kwezakhi, ukungahambi kahle komzimba kungavela. Inkambo yokwelashwa iyizinyanga eziyi-1-2, lapho kufanele uthathe kuphela ikhebula elilodwa ngosuku. Izindleko zeLiDa ziyisilinganiso sama-ruble angama-900- 1200.
Leli thuluzi lisebenza ngezindlela eziningana ngasikhathi sinye - linciphisa isifiso sokudla futhi lisebenze kwizikhungo ezithile zobuchopho ezibhekele umuzwa wokulamba kanye nenjabulo yokudla. Ngenxa yalokhu, isidingo sokusetshenziswa kaningi kokudla siyancishiswa, ukungena kwe-caloric kuyancishiswa, izinqubo ze-metabolic zijwayelekile. Kulokhu, lesi sidakamizwa asithinti kabi isistimu yezinzwa futhi asibangeli ukusabela okubi okuyingozi. Ezingeni lobuchopho, izakhi ezifana nama-antibodies e-cannabinoid receptor (1 uhlobo) ithonya, ne-microcrystalline cellulose, esekela ukwakheka kwalesi sidakamizwa, sinesibopho sokugcwala isikhathi eside.
Ukudla kuyatholakala ngohlobo lwamathebulethi amancane adinga ukungena ngaphansi kolimi isigamu sehora ngaphambi kokudla. Ungaphuza amaphilisi ayi-6 ngosuku, amabili kwithamo ngalinye. Kokwephulwa, umenzi ukhombisa ukungabekezeleli kuphela kanye nobudala obungafika eminyakeni eyi-18. Ngokuya ngohlobo olunconyelwayo lomthamo, imiphumela emibi ayinzeki ngesikhathi sokwelashwa. Intengo ephakathi yesidakamizwa emakhemisi ihluka kusuka kuma-ruble angama-350 kuya kwangama-700 iphakethe ngalinye lamathebulethi ayi-100.
Isiphetho Ngaphambi kokuthatha noma yiziphi izindlela zokunciphisa isisindo, qala uthintane nodokotela wakho bese uthola ukuthi kungenzeka kube khona ukungqubuzana okuthile. Ngokuqapha ngokweqile, umuntu kufanele asondele ukuthatha amaphilisi acindezela umuzwa wokulamba. Zingadala ukuphazamiseka kwemizwa (ukuqubuka, ulaka, ukuqwasha), ukuxhomekeka kwengqondo, ukulimala kwezitho zangaphakathi. Ama-ejenti wokuxhaphaza ngokuvamile aphephile, kepha ngisho angakudambisa ukukhuphuka kokugaya ukudla kanye nenhlala-kahle yenhlalo.
Eminyakeni emibili ngithole ngaphezu kwama-20 kg, ngakho-ke umbuzo wokuncipha komzimba wawunzima kakhulu kimi. Inkinga yayiwukuthi angikwazi ukuqhubeka nokudla isikhathi eside, ngihlala ngiphoxekile, angikwazi ukuzenqabela imikhiqizo engekho emthethweni. U-Apetinol wasiza. Ine-cellulose, edonsa esiswini futhi inikeze umuzwa wokugcwala. Ngemuva kwalokho, ngakwazi ukubheka ngomoya ophansi ama-pastries ami engiwathandayo kodwa ngasikhathi sinye anginaso isifiso sokuwajabulela. Ngenxa yalokho, ngenxa yamathebulethi, kungenzeka ukuthi alahlekelwe i-10 kg. Kepha lo akuwona umphumela wokugcina. Ngizoqhubeka nokwelashwa futhi ngithemba ukuthi ngizophinda ngithole izinhlobo zalo zangaphambili.
I-Anastasia, Nizhny Novgorod
Ngazama ukwehlisa isisindo ngezindlela ezihlukile, kepha awukho umphumela. Ngize kudokotela ngine-degree lesibili lokukhuluphala. Nganikezwa izincomo zokudla okufanele, indlela yokuphila futhi nganconywa ukuthatha iGoldline. Lo mkhiqizo wokuhlanganisa oqukethe i-microcellulose ne-sibutramine. Ngenxa yalokhu, amaphilisi acindezela isifiso sokudla. Ehlelweni lokwelashwa angifuni nokudla, futhi ngokushesha ngabona ukuthi isisindo siqala ukuncipha. Ngenxa yalokhu, ngilahle ngaphezu kwama-20 kg futhi manje ngizama ukulondoloza isisindo sami kuleli zinga.
Yimaphi amaphilisi afanele ukwehlisa isifiso sokudla
Akunakwenzeka ukungabizi nakancane noma yisiphi isidakamizwa esithile ngempumelelo kakhulu, ngoba imakethe yemithi inikezela ngezindlela eziningi zokucindezela isifiso sokudla. Kodwa nezidakamizwa ezibizayo ngeke zisize ukwehlisa isisindo uma ungaguquki imikhuba yakho nendlela ophila ngayo, ngoba umzimba awuceli lutho ngaphandle kwesizathu.
Izici zokwanda kwesifiso sokudla yilezi ezilandelayo:
ukushaqeka kwengqondo, izingcindezi,
ukuphazamiseka kwendlala yegilo,
Ngaphambi kokushintshela kumaphilisi acindezela isifiso sokudla ngaphandle kokulimaza futhi kuvuse ukushiswa kwamafutha, thintana nodokotela, ungadinga umuthi osusa izinkinga zengqondo. Kepha uma uthatha isinqumo sokunciphisa isisindo ngamaphilisi, kuzodingeka uwakhethe ngawodwana. Kunamaqembu amathathu emithi yokuncipha kwesisindo: ama-anoretics, ama-calorie blockers, ama-burners amafutha. Ukwehlisa isifiso sokudla, kusetshenziswa ama-anoretics, angasebenzi nkinga (amafutha ngokweqile), kepha abangelwa imbangela (ukudla ngokweqile). Amaphilisi aqeda ukuthambekela kokudla athengiswa nge-assortment enkulu, futhi ehlukile ngomthamo, ekwakhekeni, ngentengo, emiphumela emibi nangejubane lokuthola umphumela.
Indlela yokusebenza yezidakamizwa ze-incretin
Muva nje, izidakamizwa zohlobo lwe-incretin-(sikashukela) zokunciphisa isifiso sokudla sezidumile. Ukusebenza kwale mishanguzo ukunciphisa isifiso sokudla nokulawula ukudla ngokweqile. Kulula kubantu abathatha ukulahleka kwesisindo nokudla okungezelelekile kwabanesifo sikashukela ukulandela ukudla okune-carb ephansi. Kodwa-ke, ukwehliswa okunjalo kwesisindo akuvunyelwe kodokotela, ngoba izivivinyo zemitholampilo zabantu abaphilile azange zenziwe.
Izibhebhe ze-incretin ziqeda kancane ukuphuma kwesisu ngemuva kokudla, okwehlisa isifiso sokudla. Imithi inciphisa ukukhiqizwa kwe-glucose ngokwandisa ukungena kwesisindo semisipha ngesibindi, okuthikameza ukugaya ukudla kwama-carbohydrate emathunjini. Ngenxa yamalungiselelo esifo sikashukela, izifiso zakho zamaswidi zizokwehla, ukulawula kwakho ukudla kuyothuthuka, indlala yakho izoyeka ukukuhlupha. Kodwa-ke, izidakamizwa zohlobo lwe-incretin zinokuphikisana okuningi, ngakho-ke kungcono ukunaka amaphilisi anamandla angenakuqeda amandla okudla.
Ukubuyekezwa kokudla kanye namaphilisi okushisa amafutha
Kepha unganciphisa kanjani isifiso sakho sokudla ukuze wehlise isisindo? Kukhona uhlu lonke lwezithako zokudla zokunciphisa isifiso sokudla. Basebenza ezikhungweni zokugcotshwa kobuchopho, okwandisa ukugcwala kwe-adrenaline egazini ukunciphisa ijubane. Amaphilisi asebenza ngempumelelo kakhulu ekunciphiseni isisindo abhekwa njengezidakamizwa ezishisa amanoni. Umgomo wokusebenza kwezidakamizwa ukuvimba ama-enzyme nokubopha kwamafutha. Ake sibheke izibonelo ezithile: yimaphi amaphilisi anciphisa isifiso sokudla futhi ashise amanoni.
Phakathi kwezinhlobonhlobo zamaphilisi asebenzayo ukunciphisa isifiso sokudla nesisindo, indawo ekhethekile ithathwa isidakamizwa iGarcinia Forte. Umphumela womuthi usevele wabongwa ngabesifazane abaningi, ngoba ngosizo lwabo kulula ukukhipha isisindo ngokweqile, ngenkathi kugcinwa inhlala-kahle enhle. Amaphilisi weGarcinia Forte aqinisekiswa ngomuthi, ngakho-ke lo mkhiqizo uvunyelwe ngokusemthethweni ukuthi usetshenziswe futhi ungathengwa ngokukhululekile emakhemisi.
Ingxenye eyinhloko yamaphilisi wokudla angcono kakhulu yi-eksheni edumile evela ekhasini lekhanda lesihlahla se-garcinia, likhule e-Asia. Izithelo zaso zinezakhi zamakhemikhali ezihlukile:
IHydroxycitric acid, ekhuthaza umuzwa wokugcwala. Into ithumela isibonakaliso ebuchosheni ngesikhathi lapho umzimba ungasadingi kilojoule.
I-Pectin, nayo enikeza ukugcwala. Lapho amanzi engena emzimbeni, i-pectin esiswini iguqulwa ibe ijeli, igcwalise.
I-Laminaria, ethinta ukusebenza kwamanyikwe, ongasebenza kahle uma ukhuluphele.
I-Garcinia Forte iyisengezo sokudla esithathwa ngokudla. Ukwehlisa isifiso sokudla, kungcono ukhethe ukudla okuhambisana nalesi sidakamizwa, kudla okuncane kakhulu kotshwala nokudla kafulawa, ukuyeke ngokuphelele ukudla okunamafutha nokuthosiwe. Kulokhu, uGarcinia Forte uzoba ngumlingani onokwethenjelwa ekulweni namaphawundi awengeziwe.
Omunye umuthi eRussia wokunciphisa isifiso sokudla i-Ankir-B. Isithako esisebenzayo salesi sengezo semvelo yi-microcrystalline cellulose, esingaphukile emzimbeni ngama-enzyme, kodwa sidlula amathumbu futhi sishiya singashintshiwe. Uma ungazi ukuthi unganciphisa kanjani isifiso sakho sokudla, khona-ke i-Ankir-B iyithuluzi elifanele lokunciphisa isisindo. Izithasiselo "zigeza" i-mucosa yamathumbu ngaphakathi, ihlanze ubuthi besimende obuvimba yonke imisebenzi. Amaphilisi anciphisa izinga le-cholesterol embi, asiza ukusheshisa imetabolism futhi asuse ukudla okusetshenzwe ngokusebenzisa ipheshana lesisu.
I- "Ankir-B" isetshenziswa kabanzi ekunciphiseni isisindo, ngoba isenzo samathebulethi siqondiswe ekuhlaselweni kwesifiso sokudla. Lokhu kwengezwa kokudla ngaphandle kokunambitha, ukuhogela kanye ne-contraindication. Kwiphakheji elithi "Ankir-B" uzothola amaphilisi ayi-100, kanye nedosi yansuku zonke yokunciphisa isifiso sokudla, ngokuya ngemiyalo, lisuka kwezingcezu eziyi-9 kuye kwezingu-15. Abakhiqizi bancoma inkambo yokulahlekelwa isisindo nalesi isengezo sokudla kusuka kumaviki amane kuya kwayi-8 ukufeza umphumela wangempela.
I- “Reduxin 15 mg” nayo iphilisi elinamandla lokuvimbela elingasiza ukwelapha ukukhuluphala. Isakhi esiyinhloko salo muthi yi-sibutramine, ekwazi ukulawula indlala ngokwenza kusebenze ukucwaswa kwe-serotonin. Eminye yemiphumela ye-sibutramine yokunciphisa isisindo ukulawula kokudla okungenayo esiswini. Lapho uthatha iReduxine, umuzwa wokugcwala uhlala isikhathi eside futhi umzimba awudingi ukudla okulula phakathi kokudla.
Ngaphezu kwalesi senzo, iReduxin ithuthukisa imetabolism, ikhuthaza ukushiswa kwamafutha futhi ilethe umphumela wokupholisa ojwayelekile, yenze amazinga kashukela egazi abejwayelekile. Ngokusho kwemiyalo, ukuthathwa kwamathebulethi kufanele kuphele izinyanga ezi-3 ukufezekisa ukuncipha kwesisindo okuqhubekayo. Ngokusho kokubuyekezwa okunciphisayo, ngaphezu kwezinyanga ezintathu, ukuncipha kwesisindo kufinyelela ku-15 kg.
I-Turboslim, isifiso sokuxakatha ukudla, futhi isithasiselo esisebenza ngokuphila esisusa amanoni, sisuse ubuthi, futhi sithuthukise imetabolism yamafutha nokujikeleza kwegazi. Umphumela wokwehlisa isifiso sokudla wenzakala ngenxa yokukhishwa kwe-papaya ne-guarana, i-citrus bioflavonoids, okukhishwe ku-algae namavithamini B3 kanye no-C, okuyingxenye yamathebulethi. "I-Turboslim", ethathwa ebusuku, ihlinzeka ngokulala ngokukhishwa kwamafutha kalamula, ivumelanise amathumbu, ivuselele ukushiswa kwamakhalori. Ukuvimba isifiso sokudla, kufanele kuthathwe isigaxa esisodwa seTurboslim ngenkathi sidla.
Abakhiqizi bayalulekwa ukuthi baphuze umuthi inyanga eyodwa, bese bethatha amasonto ambalwa bese uqhubeka uma kunesidingo. Ngaphezu kwamathebulethi, ikhofi yeTurboslim ikhiqizwa abathandi bekhofi ngokufakwa kwehashi, i-burdock, ne-turmeric ekhishwe. Umuthi unciphisa isifiso sokudla futhi ukhiqiza i-choleretic, i-diuretic effect, ukuqedwa kobuthi kanye nokususwa kwe-edema. Kwabathandi betiye, abakhiqizi bakhiqiza isiphuzo setiye seTurboslim - inhlanganisela yetiye eliluhlaza okotshwe yiqabunga le-Alexandria, izigaxa ze-cherry, ama-stigmas ommbila, futhi okusiza ukukhipha uketshezi oluningi emzimbeni.
I-Microcrystalline cellulose ifana nefayibha yezitshalo ezindaweni zalo. Igcwalisa isikhala sesisu lapho igxwala ngaphansi kwethonya loketshezi. Ngenxa yalokhu, isifiso sokudla komuntu siyancipha futhi nenani lokudla elikudlayo liyancipha. Amaphilisi e-MCC anqunyelwe ukunciphisa umzimba - ahlanze umzimba wezinto eziyingozi. Abakhiqizi bakhiqiza i-microcrystalline cellulose, enothiswa ngamaminerali ahlukahlukene kanye namavithamini, ngakho-ke futhi kuthathwa njengesidakamizwa sokuvuselela, tonic.
Izibhebhe ze-MCC azinakho ukwephulwa, kepha uma umthamo wedluliwe, ungakhuthaza ukuqunjelwa. I-Cellulose ayisiwo umuthi wesimangaliso obhoboza amanoni omzimba, futhi unganciphisa isisindo nayo kuphela ngokuhambisana nenqwaba yamamanzi aqediwe nokudla kilojoule ephansi. Inkambo yokuthatha amaphilisi e-MCC akufanele idlule amasonto ama-4. I-Cellulose akufanele ithathwe ngamaphilisi angaphezu kwama-5 ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Ukuphuza amaphilisi ukunciphisa isifiso sokudla kufanele kuthathwe ngokungathi sína, ngoba abaningi banenqwaba yemiphumela emibi kanye ne-contraindication. Odokotela abakukhuthazi ukuthatha imishanguzo ukunciphisa isifiso sokudla kulabo bantu abanezifo zenhliziyo noma abajwayele ukuvela. Amaphilisi wokudla aphuzwa ngokuphelele awavunyelwe kwizigaba zabantu abane-pathologies elandelayo:
Imisipha yesimiso sezinzwa.
Ubuhlungu bekhanda kanye ne-migraines.
UCarolina, oneminyaka engama-30:"Bengicabanga ukuthi kukhona ama-anorexics aphephile - izidakamizwa ezinciphisa isifiso sokudla, kepha ngemuva kwesonto ngithathe iReduxine ngathola ikhanda elibuhlungu, ngakho-ke kwadingeka ngiwusebenze umuthi. Ngokuqondene nesifiso sokudla, angibonanga lutho. "
U-Olga, oneminyaka engama-21:“Ngifunde ukubuyekezwa ngamaphilisi ukwehlisa isifiso sokudla nesisindo se-Ankir-B ngawathenga. Ngilahlekelwe ngamakhilogremu ayi-15 ngenyanga. "Angilambanga indlala, angizikhandlekeli ngemfundo yokuzivocavoca, kepha ngivele ngaqala ukudla okuncane futhi ngahlanza amathumbu ami."
UKsenia, oneminyaka engama-26:“Izingcindezi zesifiso sokudla ezingabizi kakhulu zingamathebulethi e-MCC. Ngiyisebenzisa njengoba kudingeka futhi angizwanga yimiphumela emibi. Okokugcina, ngilahlekelwe, ngamakhilogremu ayi-7 ngenyanga - okhalweni nasiswini kulungile. ”
Amapilisi okunciphisa inkanuko. Ungayisebenzisa kanjani imithi yesifo sikashukela ukulawula iphango lakho
Izidakamizwa ezintsha zesifo sikashukela ezaqala ukwenzeka ngeminyaka yo-2000 ziyizidakamizwa ze-incretin. Ngokusemthethweni, zenzelwe ukwehlisa ushukela wegazi ngemuva kokudla nohlobo 2 sikashukela. Kodwa-ke, kule ndawo abanasisekelo esikhulu kithi. Ngoba lezi zidakamizwa zisebenza ngendlela efanayo neSiofor (metformin), noma zisebenza kancane, yize zibiza kakhulu. Zingabekwa ngokungeziwe ku-Siofor, lapho isenzo sakhe singasenele, futhi onesifo sikashukela angafuni ukuqala ngokujova i-insulin.
Izidakamizwa zesifo sikashukela i-Baeta neViktoza zingokweqembu lama-GLP-1 receptor agonists. Kubalulekile ukuthi banganciphisi ushukela wegazi ngemuva kokudla, kepha futhi banciphise iphango. Futhi konke lokhu ngaphandle kwemiphumela emibi ekhethekile.
Inani langempela lohlobo olusha lwe-2 yesifo sikashukela ukuthi kunciphisa isifiso sokudla futhi kusiza ukulawula ukuzidla ngokweqile. Ngenxa yalokhu, kuba lula ukuthi iziguli zilandele ukudla okune-carbohydrate ephansi futhi zivikele ukuhlukana. Ukuqokwa kwemithi emisha yesifo sikashukela ukunciphisa isifiso sokudla akukavunywa ngokusemthethweni. Ngaphezu kwalokho, izivivinyo zabo zemitholampilo ngokuhlanganiswa nokudla okune-carbohydrate okuningi azenziwanga. Kodwa-ke, ukuzijwayeza kukhombisile ukuthi le mishanguzo iyasiza ngempela ukubhekana nobudlova obungalawulwa, nemiphumela emincane incane.
Amaresiphi wokudla okuphansi kwe-carb wokulahlekelwa isisindo ufike lapha
Zisebenza kangakanani izidakamizwa ezintsha zikashukela?
Ukuhlolwa kwezokwelapha kukhombisile ukuthi ama-DPP-4 inhibitors nama-GLP-1 receptor agonists behlisa ushukela wegazi ngemuva kokudla ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Lokhu kungenxa yokuthi zivusa ukukhululeka kwe-insulin ngamanyikwe. Njengomphumela wokusetshenziswa kwabo kuhlangene nokudla "okunokulinganisela", i-glycated hemoglobin yehla ngo-0,5-1%. Futhi, abanye ababambiqhaza bokuhlola banciphise isisindo kancane.
Lokhu akuyona inkolo yokuthi impumelelo iyini, ngoba iSiofor (metformin) enhle ngaphansi kwezimo ezifanayo yehlisa i-glycated hemoglobin ngo-0.8-1.2% futhi isiza ngempela ukunciphisa isisindo ngamakhilogremu ambalwa. Noma kunjalo, kunconywa ngokusemthethweni ukunquma izidakamizwa zohlobo lwe-incretin ngaphezu kwe-metformin ukuze kuthuthukiswe umphumela wazo futhi kubambezele ukuqala kokwelashwa kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 nge-insulin.
UDkt Bernstein uncoma ukuthi abantu abanesifo sikashukela bathathe le mithi hhayi ukukhuthaza ukugcinwa kwe-insulin, kodwa ngenxa yomthelela wabo ekwehliseni hamu. Basiza ukulawula ukudla, ukusheshisa ukuqala komoya. Ngenxa yalokhu, amacala okwehluleka ekudleni okune-carbohydrate ephansi kakhulu ezigulini kwenzeka kaningi.
UBernstein ubeka izidakamizwa ze-incretin hhayi kuphela ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kodwa futhi nakwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 ezinenkinga yokudla ngokweqile. Ngokusemthethweni, le mithi ayihloselwe iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Qaphela Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 esiqale ukukhula kwesifo sikashukela, ie. Ukubambezeleka kokukhishwa kwesisu ngenxa yokulimala kwe-neural, ngeke zikwazi ukusebenzisa lezi zidakamizwa. Ngoba kuzobenza babe babi kakhulu.
Zisebenza kanjani izidakamizwa ze-incretin?
Umuthi we-incretin wehlisa isifiso sokudla ngoba wehlisa ijubane esiswini ngemuva kokudla. Umphumela wecala ongaba khona walokhu uzicanucanu. Ukuze unciphise ukungakhululeki, qala ukuthatha umuthi ngethamo elincane. Khuphula kancane lapho umzimba uvumelana. Ngokuhamba kwesikhathi, isicanucanu siyanyamalala ezigulini eziningi. Ngokucatshangelwa, eminye imiphumela emibi iyenzeka - ukugabha, izinhlungu zesisu, ukuqunjelwa noma isifo sohudo. UDkt Bernstein uphawula ukuthi ngokomkhuba awubonwa.
Ama-Dhib-4 ama-inhibitors ayatholakala ezibhebheni, kanye nama-GPP-1 receptor agonists ngendlela yesisombululo sokuphathwa kokufakelwa kwama-cartridge. Ngeshwa, lawo amaphilisi empeleni awasizi ukulawula iphango, futhi ushukela wegazi uncishiswa kancane. Empeleni ama-agonists we-GLP-1 receptors isenzo. Babizwa ngokuthi iBaeta neViktoza. Badinga ukujovwa, cishe njenge-insulin, kanye noma kaningana ngosuku. Indlela efanayo yokujova engenazhlungu ilungele ukujova kwe-insulin.
I-GLP-1 receptor agonists
I-GLP-1 (i-glucagon-like peptide-1) ingelinye lama-hormone akhiqizwa emgodini wesisu ukuphendula ukudla. Kusayina ama-pancreas ukuthi sekuyisikhathi sokukhiqiza i-insulin. Le hormone ibuye inciphise ukungasebenzi kwesisu futhi ngaleyo ndlela inciphisa isifiso sokudla. Kuphakanyiswa nokuthi kuvuselela ukuvuselelwa kwamaseli we-pancreatic beta.
I-peptide-1 yemvelo yemvelo yabantu ibhujiswa emzimbeni imizuzu emi-2 ngemuva kokuhlanganiswa. Ikhiqizwa njengoba idingeka futhi yenza ngokushesha. Ama-analogu ayo okwenziwa izidakamizwa iBayeta (exenatide) neVictoza (liraglutide). Zisatholakala kuphela ngesimo semijovo. I-Baeta isebenza amahora amaningi, neViktoza - usuku lonke.
Abenzi bomuthi weBaeta batusa umjovo owodwa ngehora ngaphambi kokudla kwasekuseni, omunye futhi kusihlwa, ihora elilodwa ngaphambi kokudla kwakusihlwa. UDkt Bernstein utusa ukuthi kusebenze ngendlela ehlukile - ukugwaza iBayete amahora angama-1-2 ngaphambi kwesikhathi lapho isiguli sivame ukugcwala noma ukuncipha kokudla. Uma udla kakhulu ngosuku, kusho ukuthi kuzokwanela iBayet ukujova kanye ngethamo lama-5 noma 10 we-10cm. Uma inkinga yokudla ngokweqile ivela kaningana phakathi nosuku, bese unikeza umjovo ngaso sonke isikhathi ihora ngaphambi kokuvela kwesimo esijwayelekile, lapho uzivumela ukuba udle ngokweqile.
Ngakho-ke, isikhathi esifanele somjovo nomthamo sisungulwa ngokuhlolwa nephutha. Ngokwe-theory, umthamo we-Baeta omkhulu wezinsuku zonke ungama-20 mcg, kepha abantu abanokukhuluphala ngokweqile bangadinga okuningi. Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa kweBayeta, umthamo wamaphilisi we-insulin noma wesifo sikashukela ngaphambi kokudla ungancishiswa ngokushesha ngama-20%. Ngemuva kwalokho, kususelwa emiphumeleni yokulinganisa ushukela wegazi, bheka uma usadinga ukwehlisa noma okuphambene nalokho.
Umuthi iViktoza waqala ukusetshenziswa ngo-2010. Umjovo wakhe kufanele wenziwe kanye ngosuku.Umjovo uthatha amahora angama-24, njengoba abenzi bethi. Ungakwenza nganoma yisiphi isikhathi esivumelana nosuku. Kepha uma uvame ukuba nezinkinga zokudla ngokweqile ngasikhathi sinye, ngokwesibonelo, ngaphambi kwasemini, bese ushayela i-Victoza amahora angama-1-2 ngaphambi kwasemini.
UDkt Bernstein ubheka uVictoza njengomuthi onamandla wokulawula isifiso sokudla, ubhekane nokudla ngokweqile futhi unqobe ukuxhomekeka kwe-carbohydrate. Isebenza kakhulu kune-Baeta, futhi kulula ukuyisebenzisa.
I-DPP-4 yi-dipeptyl peptidase-4, i-enzyme ebhubhisa i-GLP-1 emzimbeni womuntu. I-DPP-4 inhibitors ivimba le nqubo. Kuze kube manje, izidakamizwa ezilandelayo zaleli qembu:
Yonke le yimithi esezibhebheni, ezinconywayo ukuthi zithathwe isikhathi esisodwa ngosuku. Kukhona ne-tradent drug (linagliptin), engathengiswa emazweni akhuluma isiRussia.
UDkt Bernstein uphawula ukuthi ama-inhibitors e-DPP-4 cishe awanawo umthelela ekudla, futhi futhi anciphise noshukela wegazi ngemuva kokudla. Ubeka le mishanguzo ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 esevele zithatha i-metformin ne-pioglitazone, kodwa ezingakwazi ukufinyelela ushukela wegazi ojwayelekile futhi zenqabe ukwelashwa nge-insulin. Ama-inhibitors e-DPP-4 akulesi simo awayona indawo efanelekile ye-insulin, kepha lokhu kungcono kunalutho. Imiphumela emibi yokuthatha kubo ayenzeki.
Imiphumela emibi yemithi yokunciphisa iphango
Izifundo zezilwane zikhombisile ukuthi ukuthatha izidakamizwa zohlobo lwe-incretin kuholele ekubuyiselweni okuyingxenye kwamaseli abo we-pancreatic beta. Okwamanje akukaziwa ukuthi into efanayo yenzeka kubantu. Izifundo ezifanayo zezilwane zithole ukuthi izehlakalo zomdlavuza owodwa we-thyroid onqabile zanda kancane. Ngakolunye uhlangothi, ushukela wegazi ophakeme unyusa ubungozi bezinhlobo ezingama-24 zomdlavuza. Ngakho-ke izinzuzo zezidakamizwa ngokusobala zingaphezu kwengozi engaba khona.
Kanye nokudla izidakamizwa zohlobo lwe-incretin, ingozi eyandayo yesikhumba se-pancreitis - yaqoshwa kubantu ababenezinkinga phambilini nge-pancreas. Le ngozi ikhathazeka, okokuqala, izidakwa. Izigaba ezisele zabanesifo sikashukela azifanele ukwesatshwa.
Isibonakaliso se-pancreatitis sibuhlungu obungalindeleki futhi obukhulu besisu. Uma uzizwa, thintana nodokotela ngokushesha. Uzoqinisekisa noma aphikise ukutholakala kwe-pancreatitis. Kunoma ikuphi, yeka ngokushesha ukuthatha izidakamizwa nomsebenzi we-incretin kuze kube yilapho yonke into icacile.
Umuzwa wendlala nokudla okwandayo
Umuzwa wendlala wenzeka ngokuphelele kuzo zonke izigaba zabantu, kungakhathalekile ubulili, ubuhlanga kanye nesimo sempilo. Kunzima ukuyiveza noma iziphi izimpawu, ngakho-ke indlala ibonakala njengomuzwa ojwayelekile obonakala lapho isisu singenalutho bese unyamalala lapho kugcwele.
Umuzwa wendlala uvusa umuntu ukuthi angagcini nje ngokugcwalisa isisu, kodwa futhi afune njalo ngokuqondile ukudla uqobo. Lesi simo sibizwa nangokuthi isisusa noma idrayivu.
Ngabe yini ukukhuluma komuntu okukhulayo okungenza akhulume ngakho futhi yini isifo sikashukela esihlobene nakho?
Iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, ngisho nangemva kokudla okunenhliziyo (ngesimo sesifo), ngemuva kwenkathi yesikhathi emfushane zingaphinde zibe nomuzwa wendlala. Lo muzwa uvuka ngokuyinhloko hhayi ngenxa yokuntuleka kokudla okunempilo, kepha maqondana nokwephulwa komkhiqizo we-insulin, noma ukungakwazi kwawo ukwenza umsebenzi wawo oyinhloko. Le hormone ikhiqizwa ama-pancreas futhi inesibopho sokuqinisekisa ukuthi amaseli egazi amunca ushukela owanele (khumbula i-glucostatic hypothesis).
Ukuze uqiniseke ekugcineni ukuthi umuzwa wokungaguquki ubangelwa isifo ngqo, ungahambisana nokuchama kaningi, kanye nokoma okungagculiseki.
Indlela elula yokubhekana nendlala yesifo sikashukela iwukunciphisa ukusebenza kwe-insulin ngemithi ehlukahlukene. Kungaba ukwelashwa kwe-insulin noma amaphilisi okwenza ushukela wegazi ube ngokwejwayelekile.
Kufanele ubuyekeze kahle ukudla okudlayo. Ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, hhayi kuphela i-insulin dysfunction, kodwa futhi ne-carbohydrate metabolism ingabonakala. Ukudla kwe-carb ephansi kuzosiza lapha. Kukhona lonke uhlu lokudla okufanele kudliwe kushukela: ugarlic, u-anyanisi, izinsalela ezahlukahlukene, uwoyela onamafutha. Yidla ukudla okune-fiber enothile njengoba kuzosheshisa ukusutha. Indlela elula kunazo zonke ukukhishwa ama-herbal decoctions ngesinamoni.
Futhi okubaluleke - hambisa okuningi. Kungumsebenzi ojwayelekile womzimba onomthelela ekuvumeni kwezinqubo zokugaya, futhi futhi kuthuthukisa inhlala-kahle ephelele.
Uma ungabaza ulwazi lwakho mayelana nemikhiqizo nezinto zayo - xhumana nezazi zezempilo ezizokusiza ukuthi udale uhlobo lokudla olukhethekile olususelwa kuzinkomba zakho ngamunye.
Kuyiqiniso, kufanelekile ukukhumbula ukuthi ngaphambi kokuqhubekela kunoma yiziphi izinyathelo ezinqala, okokuqala, udinga ukuthola izeluleko kudokotela wakho, ozokhombisa isizathu sangempela sokuzwa njalo kwendlala, futhi anikeze nemithi efanelekile yokwelashwa.
Isifo Sikashukela Slimming
Ukwelashwa kwezifo zenhliziyo kungenziwa ngezidakamizwa ezikhulisa ushukela wegazi ku-serum yegazi futhi kunciphise ukumelana kwezicubu zomzimba ku-insulin. Amathuba okuphumelela ekwehliseni isisindo kanye nokwelashwa kwesifo sikashukela kuphezulu kakhulu uma isiguli siqonda ukuthi kungani sithatha izindlela zokwelapha, hhayi ukulandela nje imiyalo.
Ukubuyekezwa kweziguli mayelana nomuthi muhle kakhulu. I-Metformin yehlisa amazinga kashukela kahle futhi ayiholeli ku-hypoglycemia. Okokuqala, kungcono ukuguqukela ku-endocrinologist noma wezokwelapha.
Bheka uhlu lokudla okungavunyelwe kanye nalelo oluvunyelwe futhi olunconyelwe ukudla okunama-carbohydrate aphansi. Ngemuva kokuthenga umuthi, incwajana yokufaka kufanele ifundwe ngokucophelela.
Ummeleli kuphela wesigaba se-Biguanides yi-metformin hydrochloride. Ngenxa yalokho, ukugcwala kwe-insulin egazini kuyanda.
Thayipha ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2
Uma unesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nokukhuluphala, khona-ke ukulahlekelwa isisindo kufanele kube ngenye yezinhloso zakho eziphambili. Le ndatshana isibuyekezo, ngoba angikwazi ukukhuluma ngakho konke ngokuningiliziwe ekhasini elilodwa.
kokuqukethwe Njengoba kunezidakamizwa eziningi kakhulu zokunciphisa ushukela wegazi, nginqume ukwethula kuwe. Ukuze kube lula kuwe, ngizokhombisa kubakaki igama lokuhweba elithandwa kakhulu, kepha khumbula ukuthi kunamanye amaningi. KwaMetformin, intengo incike kumthamo: Njengoba ubona, kumenzeli we-hypoglycemic Metformin, intengo ayiphezulu, okuyi-plus enkulu. Ngokuqondene nesifo sikashukela sohlobo lwesibili, kulokhu umzimba umelana kakhulu ne-insulin, yingakho ukwehla kwesisindo kungabonakali kangako.
Isifiso sesifo sikashukela siphansi futhi siphakeme futhi.
Izindlela zokunciphisa isifiso sikashukela 1 no-2
Amaphilisi anciphisa isifiso sokudla futhi ashise amanoni.
Ochwepheshe banaka isisindo esithile, esikhuphuka ngamaprotheni noshukela. Ikhofi ayigcwalisi umzimba ngamanzi, kodwa kunalokho ikhulisa ukomisa komzimba. Ngaphezu kwamathebulethi e-metformin (Glucofage, Siofor), ekuvumela ukuthi ulahlekelwe ngamakhilogremu ambalwa, ngenkathi isiguli siwathatha nsuku zonke.
Welty ngesifo sikashukela
Ngakho-ke, nazi: ukuze okuqukethwe I-Biguanide Group iku-podium yazo zonke izidakamizwa ezinciphisa ushukela wohlobo 2 sikashukela. Imithi eqhamuka kuleli qembu inomphumela wethonya, inciphisa ukumelana ne-insulin. Ummeleli kuphela yi-acarbose (Glucobay). Akusona isidakamizwa esiyisihluthulelo somlomo sesifo sikashukela sohlobo 2, kodwa kunalokho esisebenzayo, ngoba asinamphumela ophonsa ushukela. Funda ngalesi sidakamizwa sehlisa ushukela wegazi esihlokweni esithi "Acarbose nakho konke ngakho." Esihlokweni sami esilandelayo ngizoqhubeka nendaba yezidakamizwa ezinciphisa ushukela zeqembu le-sulfonylurea namanye amaqembu.
I-athikili yami izokusiza uqonde ukuthi "ukuphi" nokuthi "yini" kulolu daba. Usuvele uyazi ukuthi le hormone ikhuthaza ukubekwa kwamafutha futhi ivimbele ukwehla kwesisindo. Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lokuqala, njengomthetho, zinama-antibodies kuma-insulin kanye ne-beta cell yamanyikwe egazini.
Mhlawumbe isiguli kuzodingeka ukuthi sihlonzwe kabusha. Izidakamizwa ezinjalo zandisa ukuzwela kwamangqamuzana omzimba kwi-insulin, okuholela ekunciphiseni kwesilinganiso sawo egazini. I-Siofor yenza imisebenzi emibili ebalulekile: Njengoba kungabonakala kuzibuyekezo, ngemuva kokuqala kokusetshenziswa kwamatafula, ukunxanela amaswidi kuyehla. I-Siofor yisivikelo esihle ekuhlaselweni yi-hypoglycemia, engaba yingozi esigulini.
Kwezinye izigaba zeziguli, izimpawu zivezwa kangangokuba aze ayeke ukuthatha iMetfomin ukuze anciphise ukugcwala kwe-glucose Kunezidakamizwa eziningi ezinomphumela ofanayo wokwelapha: Lolu akulona lonke uhlu lwezidakamizwa ezisetshenziselwa ukunciphisa ushukela. Awukwazi futhi ukuthatha amaphilisi we: Amalungiselelo aqukethe i-metformin hydrochloride atholakala kubantu abaphakathi nendawo.
Iphepha lesikhathi sokuxilongwa kwesifo sikashukela nokwelashwa
Abantu abanomzimba omncane futhi omncane mncane badinga ukufunda i-athikili “LADA-sikashukela” futhi belashwe njengoba kubhaliwe kuyo. Uma lezi zinyathelo zinganele, iziguli zinikezwa imishanguzo yokwehlisa ushukela we-serum ophezulu.
Ama-insulin amaningi akhishwa ngemuva kokudla. Ngingathanda ukukhuluma ngeqembu ngalinye lemishanguzo eyehlisa ushukela, kepha ngaphambi kwalokho nganquma “ukumemezela lonke uhlu”, bese ngichaza ngamafuphi iqembu ngalinye ngokubhekisele kuleso sihloko. Iphethini elandelayo iyabonakala: lapho uthatha kakhulu i-insulin, ushukela omningi umunwa amaseli omzimba.
Kulokhu, ungakhohlwa ngobungozi bokuphazamiseka kwengqondo kwe-dyspeptic. Lokhu kudla nakho kuyisinqumo esihle kakhulu kubantu abangakabi nesifo sikashukela sohlobo 2, kepha asebemnene kakhulu futhi abafuna ukwehlisa isisindo.
Thayipha amakhambi wesifo sikashukela anciphisa isisindo - Umuthi 2 wesifo sikashukela wehlisa isisindo
Ngasikhathi sinye, kusenemithi emisha, futhi kukhona leyo esetshenziswe isikhathi eside. Imbangela enkulu yesifo sikashukela ukufa kwamangqamuzana e-beta akuma-pancreas. Ngokuvumelana nalokhu, lapho la maseli enganele emzimbeni, i-insulin kufanele iphathwe ngendlela yokwenziwa.
Ngakho-ke, ngokwesibonelo, uma i-taurine ingezwa kumuntu, isilinganiso se-G / T siyancipha. Yize kunjalo, kuyasiza ukuthola ukuthi izidakamizwa, ezithathwa yisiguli iminyaka eminingi, zilithinta kabi ikhwalithi yegazi, zilimaza isisu nesibindi.
Izinhlobo zokwehlisa ushukela nezindlela zokusebenzisa
I-Dibicor iyindlela ephumelelayo nephephile yokwelashwa.
Uhlobo 2 Imithi Yesifo Sikashukela - Isifo Sikashukela
Iqembu le-dipeptidyl peptidase inhibitors lishukumisela ukukhiqizwa kwe-insulin, ukunciphisa amazinga e-glucagon, ukuvimbela ukuncipha kwezindawo zokugcina i-pancreatic, kanye nokuvimbela i-glucogenesis yesibindi. Azinamphumela omubi njenge-hypoglycemia.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ekubuyekezweni kwe-china
Mhlawumbe udokotela, ebhekisa kulwazi lwakhe, ukubuyekezwa kweziguli kanye nemiphumela yokuhlolwa kwakho, uzokuncoma lo muthi ngokuncipha kwesisindo kumthamo omncane ka-500 izinyanga ezingekho ngaphezulu kwezingu-3. Njengengxenye yama-asidi acid, i-taurine ibandakanyeka ekuphakanyisweni nasekufisweni kwamakhemikhali ancibilikisa amafutha, kufaka phakathi amavithamini.
Izidakamizwa zokunciphisa ushukela wegazi kuhlobo 2 sikashukela
Indlala nesifo sikashukela
Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kuyadingeka ukwazisa udokotela ngobukhona be-mellitus yesifo sikashukela ukuze ukhethe umuthi ofanele. Imiphumela emibi yeSiofor imi ngalendlela elandelayo: Imiyalo esemthethweni eya kuSiofor ngokusetshenziswa kwalamaphilisi okudla awasho lutho.
Inzuzo yesidakamizwa i-Dibikor ukungabikho kwe-contraindication kanye nemiphumela emibi. Uma lezi zimali zisiza ukusinda okungenani iminyaka embalwa yokuqala ngemuva kokutholwa kwalesi sifo, kunethuba lokuphila ngaphandle kokuthatha izidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Ngokungafani namanye amaphilisi okwehlisa ushukela wegazi, ama-Dhib-4 inhibitors asiza ukwehlisa isisindo ngokweqile kuhlobo 2 sikashukela. Kumele kwaziwe ukuthi izakhiwo zama-acid azifani ngokuphelele.
Intengo yamaphilisi kashukela kashukela
Ama-carbohydrate angaphanjwanga angena emgodini wesisu esikhulu, abangele ukuvutshelwa kuwo. I-Hypoglycemia nayo ingakhula njengomphumela wokuzila ukudla, ukuphuza utshwala, ukuzikhandla komzimba kanye nomphumela wokuthatha izidakamizwa ze-antipyretic nezama-antimicrobial.
Ngasikhathi sinye, izidakamizwa ezahlukahlukene zingabekelwa iziguli esezikhulile nasezincane. Ezincwadini ezifuywayo (11, 12, 13) nezakwamanye amazwe (19), sekuvele imibiko ngemiphumela ye-Dibicor ne-taurine yohlobo 2 sikashukela nasezigulini ezinokweqile (14). Ukusetshenziswa okuhlangene kwalezi zidakamizwa kukhombise umphumela okhonze ngokwengeziwe.
Umuthi wesibili, i-Diabeteson, uvuselela ama-pancreas ngamaseli e-beta. Kepha i-Amaril isivele isidakamizwa sesizukulwane esisha. Yebo, kulabo abahlushwa uhlobo 2 nohlobo lwesifo sikashukela mellitus, ezinye izidakamizwa zibekelwa ukuthi zilwe ngentshiseko namazinga kashukela wegazi futhi zivuse umzimba ukukhiqiza i-insulin.
Ngakho-ke, umuthi kanye nomthamo kukhethwe udokotela obhekela izici ezithile nobunzima balesi sifo. Ukwanda kwengozi yenhliziyo kwabesifazane abanesifo sikashukela kuphezulu kakhulu kunasemadodeni.
Ngesikhathi esifanayo, ngokumelene nesizinda se-metformin, i-cholesterol ye-LDL yehlile (p = 0.0025). kususelwa ku-taurine enezinkomba ezisetshenziswayo: - Ukwehluleka kokujikeleza kokugeleza kwesigaba esisebenzayo se-I-III (ngokuya ngezigaba zamazwe omhlaba) - ukudakwa okubangelwa yi-cardiac glycosides - i-insulin encike ku-insulin futhi incike ku-non-insulin. senani eligcwele leziguli ezinesifo sikashukela liyinkinga enkulu yezokwelapha neyezenhlalo yekhulu lama-21. Kuhle ukukhumbula ukuthi noma yikuphi ukwanda kwe-glucose engalawulwa kuzoholela emiphumeleni emibi yomzimba.
Izidakamizwa zehlisa ukuthulula isisu, ngaleyo ndlela sinciphise isifiso sokudla. Isifo sikashukela mellitus yisifo sokuzivikela komzimba, ngakho-ke kunzima esigulini ukuthi silulame kulesi sifo.
I-Siofor yokubuyekezwa kwezinganekwane ezinshukela.
Umuthi lo ungasetjenziswa uhlangana namanye amaphilisi wehlisa ushukela noma i-insulin. Lolu hlu lubandakanya amaphilisi: https://youtu.be/7ws Imithi yesifo sikashukela yeJo Eif Nm E Isifo sikashukela sehlisa ushukela wegazi kwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Isipikili sikashukela esimnyama ngonyawo
Izinkomba ze-Anthropometric, isinxephezelo se-carbohydrate metabolism, i-lipid spectrum, kanye namazinga e-lactate ahlolwa. Uma lezi zinyathelo zinganele, iziguli zinikezwa imishanguzo yokwehlisa ushukela we-serum ophezulu.
Izimbangela eziphambili zokufa nokukhubazeka ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 yizifo zenhliziyo, kanti izinkinga zesifo senhliziyo ezi-coronary zinesikhundla esiphambili phakathi kwezimbangela zokufa. Ngakho-ke, phakathi kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2, isifo sokuqina kwenhliziyo nokufa kwesifo kuphakama kathathu kunabantu beminyaka efanayo abangahlushwa isifo sikashukela.Kulesi sivivinyo, kutholakale ukuthi ekudleni kwe-cholesterol, ukwakhiwa kwamatshe e-cholesterol gallbladder kufinyelela ku-71-100% ngokuntuleka kwe-taurine, futhi ukwakheka kwamatshe akwenzeki lapho i-taurine ingezwe ekudleni (21). Kwakukhona ukuthambekela okwehlisa ama-triglycerides (kusuka ku-2.61 ± 0.77 kuya ku-2.45 ± 0.88, p = 0.4). Ngokwenamba yemininingwane, isenzo se-metformin sohlobo 2 sikashukela asiyona nje i-hypoglycemic (hypoglycemic), kodwa njenge-ejenti ye-antihyperglycemic, i.e. Lokhu kufakazelwa iqiniso lokuthi ukusetshenziswa kwama-Biguanides empeleni akuholeli ku-hypoglycemia.
Yiziphi izimpawu zesifo sikashukela kwabesifazane namantombazane
Ekuqaleni kwendatshana, impahla efanayo yaseDibikor yayivele ishiwo. Isidakamizwa esithandwa kakhulu kukho konke okungenhla iManinil.